Global Voices teny Malagasy » Governora Meksikana Mitsoaka Ny Tantara Ratsin’ny Fanodinkodinam-bola · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Desambra 2016 16:31 GMT 1	 · Mpanoratra J. Tadeo Nandika (en) i Erin Gallagher, Arimalala
“Dihin'ny fitsarana”. Fanaingoana avy amin'ny EDO Ilustrado . Miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny mpanakanto.
Nandritra ny volana vitsivitsy lasa, Global Voices dia nanangona vaovao momba ny kolikoly any Meksika  sy ny ezaka mba hiatrehana azy io. Ny tena malaza dia ilay raharahan'i Javier Duarte  avy any Veracruz , mpikambana fahiny tao amin'ny PRI, Antoko Revolisioneran'ny Andrimpanjakàna ao Meksika, eo amin'ny fitondràna. Naato tamin'ny asany i Duarte , ary voaroaka tao amin'ny antoko tatỳ aoriana.
Tamin'ny May 2016, navoakan'ny tranokala Animal Político  ny fanadihadiana iray manambara ny fomba nakan'ny fitantananan'i Duarte vola an-tapitrisa tamin'ny volam-panjakana nodioviny tamin'ny alalan'ny fampiasana orinasa sandoka. Volana maromaro taty aoriana tamin'ny Oktobra, niseho teo amin'ny laharana ambony indrindra tamin'ny fampahalalam-baovao maraina  i Duarte ary nanambara fa hametra-pialàna izy, ary hiatrika ny vesatra iampangana azy, avy eo nandositra izy – nampiasa angindimby an'ny governemanta araka ny loharanom-baovao sasany .
Bitsika: #Duarte  mpandositra, avy amin'i Helguera
Meksikana góber iray hafa miatrika vesatra momba ny heloka bevava i Guillermo Padrés  avy any Sonora , mpikambana ao amin'ny Antoko Hetsika Nasionaly (PAN), iray amin'ny antoko elatra havanana mpanohitra ny PRI. Nohadihadiana noho ny famotsiam-bola, fandosirana hetra, sy fikambanan-jiolahy, ankoatra ny heloka hafa i Padrés. Toa an'i Duarte, dia namorona fampisehoama tamin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny alalan'ny fisehoana tao amin'ny fampahalalam-baovao maraina  izy, izay nanambaràny fa hitolo-tena any amin'ny polisy izy. Enina andro taorian'izay, tamin'ny 16 Novambra, nandidy azy ny fitsarana mba hijanona any am-ponja nandritra ny fotoam-pitsarana azy noho ny fandrobàna ny kitapom-bolam-panjakana, mba hisorohana ny fisian'ny góber mpandositra hafa.
Antonio Lozano Gracia  mpisolovava an'i Padrés dia lahy antitra fetsifetsy mpanao politika ao Meksika. Lehiben'ny Fampanoavan'ny Repoblika nandritra ny vanim-potoana rakotry ny aloky ny fanadihadiana ireo vono olona nalaza indrindra tamin'ny 1990 i Lozano. Very ny fitokisana rehetra tamin'ny asany rehefa nipongatra ny hoe ny andrim-panjakana notarihiny dia niantehitra tamin'ny asan'ny mpahita iray fantatra amin'ny anarana hoe “La Paca ” mba hanampy azy ireo. Amin'izao fotoana izao, miaro an'i Padrés i Lozano ary hatramin'i Javier Duarte ihany koa – araka ny filazan'ny mpanao gazety sasany .
Antonio Lozano, mpisolovavan'i guillermopadres , dia matoky fa ho ambara ny maha-tsy manantsiny ny olona arovany.
Roberto Borge Angulo  dia góber iray hafa izay namela ny governemantam-panjakany teo ambivitry ny banky rompitra. Talohan'ny nametrahan'i Borge fialàna, tatitra iray fanadihadiana mitondra ny lohateny hoe “Ireo Mpijirik'i Borge ” no nampibaribary ny kolikoly tao amin'ny fitantanan-draharahany, anisan'izany ny fomba nanànan'i Borge fiaramanidina , sy ny nampiasany azy io mba hitondràna ny governora, ny fianakaviany sy ny namany taminà fiaramanidin'olontsotra saingy amin'ny volam-panjakana.
Bitsika avy amin'i Ignacio Dector: Aza avela handositra ny saobakaka Borge ary andao asaintsika averiny ny zavatra rehetra nangalariny, nalainy ho azy, nendahany!!! Ary koa saintsika manefa ny fanimbana ny tontolo tao Tajamar  izy!
Tsy hoe tsy tsikaritry ny fiarahamonim-pirenena ny tsy fisian'ny faharesen-dahatra. Manambara momba an'i Javier Duarte i María Amparo Casar :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/19/92816/
 kolikoly any Meksika: https://globalvoices.org/2016/07/05/a-new-mexican-organization-is-trying-to-put-an-end-to-corruption//
 fampahalalam-baovao maraina: http://noticieros.televisa.com/programas-despierta-carlos-loret-mola/2016-10-12/javier-duarte-solicitara-licencias-gobierno-veracruz/
 loharanom-baovao sasany: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/javier-duarte-utilizo-un-helicoptero-de-veracruz-acepta-flavino-rios.html
 fampahalalam-baovao maraina: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=639995&idFC=2016
 araka ny filazan'ny mpanao gazety sasany: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/salvador-garcia-soto/nacion/2016/11/15/el-defensor-de-los-gobers
 milaza : http://machacanews.com/sostiene-lozano-gracia-inocencia-de-guillermo-padres/
 Ireo Mpijirik'i Borge: http://expansion.mx/nacional/2016/07/06/los-piratas-de-borge-el-saqueo-de-bienes-institucionalizado-en-quintana-roo
 nanànan'i Borge fiaramanidina: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/carlos-loret-de-mola/nacion/2016/09/30/aero-borge
 fanimbana ny tontolo tao Tajamar: https://globalvoices.org/2016/04/17/community-fights-to-protect-cherished-mangrove-in-cancun-mexico/